द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | नोभेम्बर 18, 2021 | लिखित र मौखिक संचार कौशल
व्यावसायिक मेल र कुरियर: के फरक छ?
एक पेशेवर इमेल र एक पत्र बीच, समानता को दुई अंक छन्। लेखन व्यावसायिक शैलीमा हुनुपर्छ र हिज्जे र व्याकरणका नियमहरू पालना गर्नुपर्छ। तर यी दुई लेखहरू ती सबैका लागि बराबर छैनन्। संरचना र विनम्र सूत्र दुवैमा भिन्नताहरू छन्। यदि तपाइँ तपाइँको व्यावसायिक लेखन को गुणस्तर सुधार गर्न को लागी एक कार्यालय कर्मचारी हुनुहुन्छ भने, तपाइँ सही स्थानमा आउनुभएको छ।
छिटो वितरण र थप सरलताको लागि इमेल
कोईमेल कम्पनीहरु को कार्य को लागी एक आवश्यक उपकरण को रूप मा वर्षहरु मा स्थापित छ। यसले सूचना वा कागजातहरूको आदानप्रदानको सन्दर्भमा धेरैजसो व्यावसायिक परिस्थितिहरूमा अनुकूलन गर्दछ।
साथै, इमेल विभिन्न मिडियामा हेर्न सकिन्छ। यसमा कम्प्युटर, स्मार्टफोन वा ट्याब्लेट समावेश छन्।
यद्यपि, व्यावसायिक पत्र, यद्यपि यो कम बारम्बार प्रयोग गरिन्छ, आधिकारिक अन्तरक्रियामा उत्कृष्टताको भेक्टर मानिन्छ।
पत्र र व्यावसायिक इमेल: फारममा भिन्नता
इमेल वा व्यावसायिक इमेलको तुलनामा, पत्र औपचारिकता र कोडिफिकेशन द्वारा विशेषता हो। पत्रको तत्वको रूपमा, हामी सभ्यताको शीर्षकको उल्लेख, पत्रलाई उत्प्रेरित गर्ने अनुस्मारक, निष्कर्ष, विनम्र सूत्र, साथै ठेगाना र प्रेषकको सन्दर्भहरू उद्धृत गर्न सक्छौं।
अर्कोतर्फ इमेलमा, निष्कर्ष अवस्थित छैन। विनम्र अभिव्यक्तिको लागि, तिनीहरू सामान्यतया छोटो हुन्छन्। हामी प्रायः "इमान्दारिता" वा "अभिवादन" प्रकारको विनम्रताका अभिव्यक्तिहरू भेट्छौं, जुन परम्परागत रूपमा लामो अक्षरहरूमा पाइने भिन्नताहरू छन्।
रिड पर्यवेक्षकलाई माफी माग्ने इमेल इम्प्लेट
यसबाहेक, एक पेशेवर ईमेलमा, वाक्यहरू संक्षिप्त छन्। संरचना अक्षर वा अक्षरमा जस्तो छैन।
व्यावसायिक इमेल र अक्षरहरूको संरचना
प्रायजसो व्यावसायिक अक्षरहरू तीन अनुच्छेदहरू वरिपरि संरचित हुन्छन्। पहिलो अनुच्छेद विगतको सम्झना हो, दोस्रोले वर्तमान अवस्थालाई ट्रेस गर्दछ र तेस्रोले भविष्यमा प्रक्षेपण गर्दछ। यी तीन अनुच्छेद पछि समापन सूत्र र विनम्र सूत्र पालना गर्नुहोस्।
व्यावसायिक इमेलहरूको लागि, तिनीहरू पनि तीन भागहरूमा संरचित छन्।
पहिलो अनुच्छेदले समस्या वा आवश्यकता बताउँछ, जबकि दोस्रो अनुच्छेदले कार्यलाई सम्बोधन गर्दछ। तेस्रो अनुच्छेदको रूपमा, यसले प्राप्तकर्ताको लागि थप उपयोगी जानकारी प्रदान गर्दछ।
यो ध्यान दिनुपर्छ, तथापि, भागहरूको क्रम फरक हुन सक्छ। यो इमेल को प्रेषक वा प्रेषक को संचार मनसाय मा निर्भर गर्दछ।
जे भए पनि, यो एक पेशेवर इमेल वा पत्र हो, यो स्माइली प्रयोग नगर्न सल्लाह दिइन्छ। "Cdt" को लागि "Incerely" वा "Slt" को लागि "ग्रीटिंग्स" जस्ता विनम्र सूत्रहरूलाई संक्षिप्त नगर्न पनि सिफारिस गरिन्छ। तपाईं जतिसुकै नजिक भए पनि, तपाईं सधैं आफ्ना संवाददाताहरूसँग समर्थक भएर लाभ उठाउनुहुनेछ।
एक पत्र देखि एक पेशेवर इमेल फरक नोभेम्बर 18th, 2021Tranquillus
अघिल्लोशुरुवातकर्ताहरूको लागि माइक्रोसफ्ट पावर BI आधारभूत कुराहरू
निम्नयो इमेल वा बरु पत्र पठाउन राम्रो छ?
तपाईंको वाक्य हल्का गर्न पाँच सुझावहरू
दोषको एक बल कसरी खेती गर्ने?
एक विशिष्ट सन्दर्भ मा ईमेल को अन्त्य मा विनम्र सूत्रहरु